10 အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာဥရောပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာဥရောပ
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 31/10/2020)
ဥရောပနှင့်ပြည့်ဝ၏ ကြွယ်ဝသောသမိုင်း နှင့်မတူကွဲပြားမှု. တကယ်တော့, အဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာသွား, သင်ဖြစ်နိုင်အမြင်အကြွင်းအကျန်၏အတိတ်ယဉ်ကျေးမှု. တခါတလေ, ဤနေရာများကိုပျက် uninhabited. သို့သော်ငြားလည်း, ဤနေရာဒေသဖြစ်နိုငျသောအရပ်တို့ကိုကျန်ရစ်ပြီအချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းခေတ်သစ်ဤလောကသို့. တစ်ဦးကရထား Save ကြာခရီးစဉ်အပေါ်အ 10 အလှဆုံးအလယ်ခေတ်မြို့၌ဥရောပ. အလယ်ခေတ်ကာလမှထိုရက်စွဲပြန်ဒြပ်စင်နှင့်အတူလှပသောမြို့များကြောင်းရောစပ်သမိုင်းနှင့်ခေတ်သစ်ဘဝကိုကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်ပါ.
1. အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာတော့ဥရောပ – Delft, နယ်သာလန်
အဘို့ရှာကြသည်လျှင်တစ်မြို့ပါဝင်သောအလယ်ခေတ်ခံစားရခေတ်သစ်ကမ္ဘာအတွက်, ကြည့်ရှုခြင်းမရှိထပ်မံထက် Delft. ကအနီးကပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကတည်းက Delft အနုပညာအတော်ပင်သူမည်သူမဆိုတစ်ဦးခေါင်းလောင်းမြည်စေခြင်းငှါ, ဒတ်ချီဆရာ Vermeer. တကယ်တော့, သင်သည်အစဉ်အဆက်ကိုအလည်မြို့, သင်ခံစားရလျှင်သင်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကပန်းချီ. သင်ဆဲခံစားရ၏အနှစ်ပန်းချီစဉ်ကိုတဆင့်လမ်းလျှောက်မြို့. မှကြွလာသောအခါအလယ်ခေတ်အဆောက်အအုံ, ရှိသည်တို့ကိုစတိုင်မြို့တော်ခန်းမနှင့်အလယ်ခေတ်ခရစ်ယာန်နှင့်အတူတစ်ဦးအထင်ကြီးဖၚျ. အပြင်ကနေသိသိသာသာအလယ်ခေတ်ဗိသုကြောင်းလိမ့်မည်သင်အလွန်အံ့သြ, Delft လည်းရေမြောင်းသွားသောအားဖြင့်မြို့နှင့်ဝန်းကျင်ထူးခြားတဲ့.
Hallstatt ထင်ရစေခြင်းငှါရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့လူတွေကိုလိုက်နာ picturesque ခရီးအပေါ် Instagram. မြောက်မြားစွာရှိပါတယ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံများကနေဧရိယာ, ပြီးတာနဲ့သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အမြို့, သငျသညျအဘယျကွောငျ့သိကြပါလိမ့်မယ်. ယူတဲ့မကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံလိုအပ်ပါလိမ့်မည်အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်စိတ်ကူးမြစ်ကမ်းမြို့သူမြို့, အရာအံ့သြဖွယ်ရှေ့တော်. လည်း, တစ်ခုလုံးကြည့်နဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမြို့ချန်ထားမည်၊သငျသညျကွောကျရှံ့. အလုံးအရပ်ရှိပါတယ်၊တစ် Baroque အဲဒါကိုခံစား, ထိုသို့ဒါကြောင့်အထင်ကြီးယူဆ ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အအမွေအနှစ် site ကို. အတွေ့အကြုံအလယ်ခေတ်ခံစားရ၏Hallstatt၏နောက် ခရီးစဉ် သြစတြီးယားမှ.
3. အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာတော့ဥရောပ – Echternach, လူဇင်ဘတ်
အမှန်အီးrnach အသက်အကြီးဆုံးမြို့၌Luxemburg, နှင့်အဝှမ်းတည်ရှိသည်၏နံရံ Echternach ဆွစ်. အိမ်တွေအများကြီးဟောင်းနှင့်အထင်ကြီးသမိုင်းဝင်နေရာများ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အသင်းတော်၏စိန့်ပေတရုနှင့်ပေါလု, ၏စိန့် Willibrord, နယ်ကျေးဈေး, နှင့်ရောမအပန်းဖြေသောရက်စွဲများ၏အဆကိုပြန်အရောမအင်ပါ. ကိုတဆင့်လမ်းလျှောက်၏လမ်း Echternach ကဲ့သို့သင်တို့ကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်၌အလယ်ခေတ်ကာလ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာအားလုံးကိုရှိသည်လိမ့်မယ်အများ၏သက်သာတဲ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာနှင့်အမှောင်ခေတ်.
4. Carcassonne, ပြင်သစ်
Carcassonne အလယ်ခေတ်မြို့သည်တံတိုင်းမှပယ်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာ. အမှတ်တရများနှင့်တာဝါတိုင်မှနောက်ကျောချိန်းတွေ့ ၁၃ ရာစုနှင့်အမှန်တကယ်ထိုမြို့ကိုအကြည့်နဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု၏အလယ်ရွာ. ဒီနေ့ခေတ်, Carcassonne သည်ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာပေးသည်သောခံစားချက်သင်ခရီးထွက်ခဲ့ကြပြန်အချိန်အတွက်. ဤသည်ဝိဇ္ဇာအတတ်အားနှင့်မှော်လေထုအဟောင်းကမ္ဘာကြီးလေထုတွေ့ကြုံခံစားချင်သောမရေမတွက်နိုင်သောခရီးသွားဧည့်အတွက်ဆွဲယူ.
Carcassonne မှ Narbonne
Carcassonne မှ Toulouse
Carcassonne မှ Montpellier
Carcassonne မှ Nimes
5. အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာတော့ဥရောပ – Heidelberg, ဂျာမနီ
Heidelberg အတွက်အတော်လေးတဲခိုမနေဧရိယာ. တကယ်တော့, ထိုဒေသရှိပြီးနေအိမ်မှလူအများအတွက်အနှစ်. မြစ် Neckar နှင့်တစ်ဦးအဆင်သင့်ရာသီဥတုဖို့နီးကပ်ရာအရပ်ကောင်းတစ်အိမ်မှာရာ၌ခန့်ထားပြီ. တစ်လျှောက်လုံးအနှစ်, လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ဟိုလူ. တကယ်တော့, ဤသည်ဝန်းကျင်နှင့်ဗိသုကာမြို့. တစ်ခုလက်ရာမြောက် Baroque မြို့လယ်နဲ့တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်ရဲတိုက်ယ့်အရာနှစ်ခုအကြောင်းပြအပေါများကြွယ်ဝပြီးတန်ခိုးအာနုဘော်ထိုဒေသတွင်တိတ်ဆိတ်တစ်လျှောက်လုံးအချိန်. Hieldberg မပစ်မှတ်အတွင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်, ဆိုလိုတာကဆဲသယ်ဆောင်အများကြီး၎င်း၏သမိုင်း. တစ်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ယူဖြင့်ဤအံ့သြဖွယ်တည်နေရာနှင့်အရာအားလုံးကိုမြင်ကကိုဆက်ကပ်ရန်ရှိ.
6. Bern, ဆွစ်ဇာလန်
မှကြွလာသောအခါအလယ်ခေတ်မြို့များတွင်အာရှ, Bern ဆွစ်ဇာလန်အတွက်မဖြစ်မနေအလည်အပတ်ခရီးဖြစ်ပါတယ်. ချစ်စရာကောင်းတဲ့, ဟောင်းမြို့သည်လှပသောမြို့၌ဥရောပ. ဒါဟာအပြည့်အဝ arcades ထိုရက်စွဲမှနောက်ကျောအလယ်အလတ်အသက်အရွယ်နှင့်စမ်းရေကြောင်းဖော်ပြနိုင်အမျိုးမျိုးသောအနုပညာကိန်းဂဏန်းများ. တကယ်တော့, မှကြွလာသောအခါအနုပညာ, ဘန်းမြို့ရှိအကြီးဆုံးစုဆောင်းမှု၏အနုပညာမှအနုပညာရှင်ပေါလု Klee. ကိုဗိသုကာအလှအပနှင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးအတွက်မြို့, ကိုလည်းရှိပါတယ်တဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အမြစ်ဖြတ်သန်းသွားတယ်. အမြစ် Aare တတ်အားဖြင့်ထိုမြို့ကိုအလွန်အမင်း picturesque. Mark Bern သည်ဆွစ်ဇာလန်သို့သင်၏နောက်ခရီးစဉ်တွင်စူးစမ်းလေ့လာမည့်နေရာဖြစ်သည်.
ဇူးရစ်ရန် Bern ရထား
ဂျီနီဗာရန် Bern ရထား
Interlaken ရန် Bern ရထား
7. အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာတော့ဥရောပ – စန်း Gimignano, အီတလီ
စန်း Gimignano တစ်ဦးကျောင်းစာအုပ်တောင်မြို့မှနန်း. အရောက်၌ဧည့်သည်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူ၎င်း၏အလယ်ခေတ်ကိုအီတလီကိုကြည့်ပါ. အဓိကဆွဲဆောင်မှုအတွက်စန်း Gimignano အမစ္အ၏ရင္သပ္ရႈေတာဝါတိုင်မှနောက်ကျောချိန်းတွေ့ ၁၄ ရာစု. အခါဧရိယာကျဆင်းအောက်စိုးမိုးယို, အားလုံးဒါပေမယ့်ယ့်အစားခုနစ်ဆယ်နှစ်ယောက်တာဝါတိုင်များဖျက်ဆီးခံခဲ့ရ. ယနေ့ထိုမြို့သည်အနက်အမွေအနှစ်နေရာ, ထိုသို့အီတလီနိုင်ငံချမ်းသာစိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းအတွက်အကျိုးစီးပွားရှိကြောင်းမည်သူမဆိုများအတွက်တွေ့မြင်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်.
8. အသုံး, ဘယ်လ်ဂျီယံ
အများစုကရည်ညွှန်း အသုံး အဖြစ်ဗင်း၏မြောက်ဘက်. ဒါဟာအပြည့်အဝမြောင်း, cobbled လမ်း, နှင့် picturesque ထပ်သောအားဖြင့်ဝိုင်းရံမြင့်တက်တာဝါတိုင်နှင့်အသင်း. ဤရုံအချို့ဆွဲဆောင်မှုရောက်စေကြောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခရီးဒီအဆန်းမြို့. Bruges မှတဆင့် Walking သဘာဝတရား၏အရောအနှောမှာကွောကျရှံ့သငျသညျစွန့်ခွာမည် ဗိသုကာအံ့ဘွယ်သောအမှု. အဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်၏အလယ်ခေတ်အဆောက်အဦးအတွက်မြို့, နှင့်သင်သေချာပါစေတစ်ဦးအလည်အပတ်မှဤမြို့ချန်ထားမည်မှာအံ့သြအလွအပႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျဧရိယာ.
9. အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာတော့ဥရောပ – Lillafured, ဟန်ဂေရီ
Lillafured ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်၏သဘောသဘာဝနှင့်အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ. တည်ရှိပြီးကန် Hamori ဟန်ဂေ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမဖြစ်မနေအလည်အပတ်ခရီးတည်နေရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကနဦးအရေအတွက် Andras Bethlen ကအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်တည်ဆောက်ခဲ့. သို့သျောလညျး, အချိန်ကျော်, ဒါဟာဖြစ်လာခဲ့သည်တစ်မြို့တစ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟိုတယ်. အဆိုပါအံ့ဖှယျရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ် တစ် ဦး ရေတံခွန်ကဝိုင်း, သဘာဝဂူ, တောင်တက်လမ်းကြောင်း, နှင့်ပင်ကြိုးဆွဲဥယျာဉ်. သင်မြင်သည့်အတိုင်း, Lilafured အဆိုပါဖြစ်ပါသည် ပြီးပြည့်စုံသောလိုရာခရီး သဘာဝချစ်သူများများအတွက်.
10. Montepulciano, အီတလီ
တဆင့်သွားနေစဉ်အဆန်နှင့် picturesque Tuscan တောင်, သင်အပေါ်သို့ရောက်အလယ်ခေတ်မြို့တောင် – Montepulciano. ဒါဟာအရာအားလုံးနိုင်မှချင်တယ်အီတလီရွာ. အဓိကဆွဲဆောင်မှုပါဝင်သည်ကဲ့သို့အမှုအရာအံ့သြဖွယ်သောစပျစ်ရည်, ရှေးဟောင်းရဲတိုက် နံရံများ, အရသာအစားအစာ, ပင်အပူစမ်း. ဒါဟာအမှန်တကယ်တစ်ချိုသောနေရာသင်အမြဲသတိရပါ။. သေချာအောင်ရပ်တန့်လျှင်သင်အစဉ်မှတစ်ဆင့်ခရီးသွားလာအီတလီနိုင်ငံ.
Montepulciano ရထားမှ Siena
Montepulciano ရထားမှ Grosseto
Florence Montepulciano မှရထား
မှကြွလာသောအခါအလယ်ခေတ်မြို့, ဥရောပတိုက်၏အပြည့်အဝသူတို့ကို. ရောက်လည်ပတ်ဖို့အချိန်ယူ၊ဤ coves၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းကြွယ်ဝလိမ့်မည်သင်သည်သင်၏အမြင်တွင်အဘယ်အရာနိုင်စွမ်းရှိကြ၏. စာအုပ်တစ်ရထား အချိန်တိုအတွင်းနှင့်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိသောနိုင်ငံများသို့လည်ပတ်ပါ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အများစုကတင့်တယ်အလယ်ခေတ်မြို့မှာဥရောပ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-medieval-towns-europe%2F – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#အချစ်ဇာတ်လမ်း #traveleurope အလယ်ခေတ် အလယ်အလတ် ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား